Daawo Sawirada: Fanaan Caan ah oo Maanta Muqdisho yimid farxad darteedna dhulka u shumiyay. - jornalizem
Daawo Sawirada: Fanaan Caan ah oo Maanta Muqdisho yimid farxad darteedna dhulka u shumiyay.
Waxaa Maanta Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho kasoo dagay fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Maxamed Axmed Qoomaal oo mudo kabadan 20-sano dalka ka maqnaa.
Fanaanka oo u muuqday mid aad ugu faraxsanaa in uu maanta Dalka kusoo laabto kana soo dago Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa durbo shumis dhulka ku bilaabay iyadoona la arkayay fanaanka oo farxad dareteed sujuudsan dhulkana shuminaya.
Maxamed Axmed Qoomaal ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu maanta Muqdisho kasoo dago mudo kadib waxa uuna aad u amaanay Magaalada uu sheegay in ay tahay mid kaduwan muuqaalada laga bixiyo.
Waayihii dambe Magaalada Muqdisho waxaa dib ugu soo laabanayay fanaaniinta Dalka kuwooda ugu waa weyn kuwaa oo dalka ka qaxay waxii ka dambeeyay Bur burkii Dowladii dhaxe ee Dalka , waxaana hada Muqdisho kusugan Fanaaniin waa weyn ay ku jirto Fanaanada Hibo Nuura.